दीपिकाको फिल्ममा बिग बोस १२’का रोहित ! यस्तो छ फिल्मको तयारी ! - Filmy News Portal Of Nepal
निर्देशक दिवाकार भट्टराइले निर्देशन गर्न लागेको नयाँ चलचित्र ‘तिमीसँगै हुने मन छ’बाट मुम्बइका रोहित सुचान्तीले डेब्यू गर्ने पक्का छ । निर्देशक भट्टराइले रोहितसँग कागजी संझौता भैसकेको पुष्टी गरे । उनले भने–‘चलचित्रमा रोहित हुने पक्का भैसकेको छ । प्राविधिक टिमपनि भारतबाटै आउनेछन् ।’
यो चलचित्रमा नायिका दीपिका प्रसाँइले काम गर्दैछिन् । यसअघि चलचित्रमा नायक पल शाह र निराज प्रधानले काम गर्ने मौखिक सहमती भएको थियो । तर, अब चलचित्रमा नायकको रुपमा महावीर जैन कलेज मुम्बइबाट ब्याचलर गरेका रोहितले काम गर्ने पक्का भएको छ । रोहितले ‘तुने प्यार किया, रिश्ता लिखंगे हम नयाँ’ लगायतका आधा दर्जन सिरियलमा पनि काम गरेका छन् । उनले, रियालिटी शो ‘बीग बोस १२’मा पनि भाग लिएका थिए ।